Isbedelada lagu sameeyo Shuruudaha lagu dayactirayo MacBooks-ka oo leh arrimo daahan oo ka tarjumaya muujinta | Waxaan ka socdaa mac
Kuwa ka masuulka ah 9to5Mac ayaa marin u helay warbixin ka socota Apple oo lagu hagaajiyay bixiyeyaasha adeegga ee ay oggolaatay shirkadda Mareykanka. Waxay xasuustaan ​​in 12-inch MacBook iyo Retina MacBook Pro lagu daydo wali la dayactirayo iyo in xaaladaha qaarkood ay dhibaatooyin ku qabeen daahan ka-hortagga milicsiga shaashadda. Waxay u muuqataa in dhammaan isticmaaleyaashii dhibaatadan lahaa aysan aadin adeegga farsamada si loo dayactiro. Hagaag taasi ama in dhibaatadu aysan muuqan, laakiin waa wax wanaagsan in la ogaado in wali waqti jiro, inkasta oo barnaamijka wax laga bedelay.
Sannadkii 2015 Apple waxay ku dhawaaqday barnaamij dayactir cusub oo loogu talagalay 12-inch MacBook iyo Retina MacBook Pro moodooyinka. Kuwa lahaa dhibaatooyinka lakabka anti-milicsiga shaashadda. Dhibaatada ayaa aad looga faalloodayama shabakadaha bulshada, fagaarayaasha internetka oo ay kujiraan Apple-keeda iyo warbaahin takhasus leh sida tan. Apple wuxuu kordhiyay waqtiga si loo dayactiro shaashaddaas ay wax ku noqdeen.
Hadda, waxaa fursad loo helay warbixin gudaha ah oo Apple ah oo xusuusineysa adeeg bixiyeyaasha adeegga Apple-idman in moodeladaan kumbuyuutarrada ah wali la dayactirayo. Caqli ahaan, kaliya kuwa ay saameeyeen dhibaatada daaha ka-hortagga milicsiga ee shaashadaha. Shirkaddu waxay cusbooneysiisay siyaasadda barnaamijka dayactirka Janaayo 0, 4. Moodooyinka 2021-inch ee MacBook ama MacBook Pro oo leh mowduuc ka hortagga milicsiga ayaa hadda la sheegay iyaga ayaa loo diri doonaa Apple si ay u dhamaystiraan dayactirka.
Xusuus-qorkan gudaha wuxuu sheegayaa tani waxay kordhin kartaa waqtiga sugitaanka xaaladaha badankood. Ma cadda sababta Apple u go’aansatay inuu wax ka beddelo siyaasadiisa. Si aad ugu baahatid in MacBooks lagu soo diro boostada waxaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay la'aanta qaybo ka mid ah keydka ama faafida awgeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Isbedelada shuruudaha ku saabsan dayactirka MacBooks oo leh arrimo daahan lidka-milicsiga ah oo ku saabsan bandhigyada